Umthandazo kwiNtombi Enyulu kaFatima. ? Ngummangaliso kwaye unamandla! [+]
Umthandazo kwiNtombi kaFatima
4 Ukufundwa kweMin
Umthandazo kwiNtombi Enyulu kaFatima; Kuyo nayiphi na imfuno onayo unokuwuphakamisa lo mthandazo.
Uthando kunye nesisa seNkosazana enguMariya kwenye yezimpawu zakhe ezininzi zinamandla amakhulu.
Yena, njengomama weNkosi yethu uYesu Krestu kunye nomhlobo kaThixo, umdali wezinto zonke, angasithethelela ezulwini kwaye ke ngaloo ndlela afumane ubabalo okanye ummangaliso esiwudinga kakhulu.
Imithandazo yemihla ngemihla inokwenziwa, kunye nosapho, ekhaya, eofisini okanye ngokulula Yenza izivakalisi ngokuzenzekelayo
Into ebalulekileyo kukuba siyenze nokholo ukuba uyasimamela kwaye ukubiza kwethu uncedo kuyanceda.
1 Umthandazo kwiNtombi yeFatima Ngubani iNtombi kaFatima?
2 Umthandazo kwiNtombi kaFatima
2.1 Uyintoni umthandazo weNtombi kaFatima?
3 Ndingathandaza nini?
4 Ngaba le ntombi izakundinceda?
Umthandazo kwiNtombi yeFatima Ngubani iNtombi kaFatima?
Kuthiwa ngonyaka we-1917, le ntombi yabonwa nguFrancisco, uLucía noJacinta abaziwa njengabalusi abathathu beNtombi yeFatima.
Oku kwenzeke kwidolophu yasePortugal enegama elifanayo lentombi.
Ezinye iinkcukacha ezinomdla zebali zixelela ukuba ingelosi eyaziwa ngokuba yiAngel de Portugal, yanxibelelana nabelusi abancinci kunyaka ophelileyo ngenjongo yokulungiselela ukubonakala kwale ntombi.
INtombi yatyhila iimfihlakalo ezintathu kwaba balusi, abathi ngokuthe ngcembe bayiveze kwamanye amakholwa.
Kuyaziwa ukuba le yokugqibela yatyhilwa ngo-2000 nguKhadinali Ángelo Sodano.
Inyani yile yokuba emva kokuvela kwakhe okokuqala, iNtombi Enyulu kaFatima ilandelwa ngamawakawaka amakholwa kubo bonke el mundo, abantu abafuna ummangaliso kwaye le ntombi ubanike amangqina athembekileyo amandla akhe.
O Ntombi enguSikelelweyo, Ubuye wabonakala ebantwaneni; Ndingathanda ukukubona, uve ilizwi lakho ndikuxelele: Mama wam, undise ezulwini.
Ndithembele kuthando lwakho, ndicela undinike unyana wakho uYesu ukholo oluphilayo, ubukrelekrele ukuze ndimazi kwaye umthande, umonde kunye nobubele bokumkhonza kubazalwane bam, kwaye ngenye imini ndikwazi ukuhlangana nawe apho ezulwini.
Bawo wethu, Mdumiseni uMariya kunye nozuko.
Mama wam, ndicela nani abazali bam, ukuze bahlale kunye eluthandweni; bazalwana bam, usapho kunye nabahlobo, ukuze ukuhlala kunye kusapho ngenye imini sikwazi ukonwaba kunye nawe kubomi banaphakade.
Ndikubuza ngendlela ekhethekileyo yokuguqulwa kwaboni kunye noxolo lwehlabathi; kubantwana, ukuze bangaze basilele kuncedo oluvela kuThixo kwaye yintoni eyimfuneko kwimizimba yabo, kwaye ngamhla othile bazuze ubomi banaphakade.
Bawo wethu, Bingelela uMariya kunye no-Luzuko oh Mama, ndiyazi ukuba uya kumamela, kwaye uza kundifumana kunye nokuba zingaphi na igrace endikubuzileyo, kuba ndicela uthando lwakho lo Nyana wakho uYesu.
Mama wam, nantsi unyana wakho, yiba nguMama wam! Intliziyo emnandi kaMariya, mayibe lusindiso lwam!
Umthandazo weNtombi Enyulu kaFatima ngummangaliso.
Kulo Izibhalo ezingcwele, ubawo osezulwini uthembisa ukuyiphendula yonke imithandazo yethu nokuba sele yenziwe ngokholo kwaye isuka entliziyweni, oko kukuthi, ngokunyaniseka.
Kwimeko yemithandazo ebhekiswa kwiNtombi yeFatima esi sithembiso siba namandla nangakumbi, kuba sithetha ngokumelwa kwentombi enye enguMariya ongunina kaYesu.
Ngaphandle kwayo yonke le nto kukho inyani yokuba le Ntombi inyulu inikwe abantwana abathathu kwaye isuka apho iye ebantwini kuthi, njengathi, babeneemfuno kwaye babedinga ungenelelo olungcwele ebomini babo.
Emva koko siyakholelwa ukuba kanye njengokuba kwenzeka kwixesha elidlulileyo inokwenzeka ngoku.
Uyintoni umthandazo weNtombi kaFatima?
Imithandazo yeNtombi Enyulu yaseFatima inokuba neenjongo ezininzi zamaxesha athile kubomi bethu, ngoko ke amandla omthandazo awanakuphela kwinto enye.
Emva koko singatsho ukuba, njengayo yonke imithandazo, nale inako uncedo ngexesha elithile siyalufuna.
Nokuba kungokuphiliswa ngokungummangaliso, ukukhuselwa okanye nasiphi na isicelo, umthandazo uhlala uhlala ukhonza kakhulu.
Impendulo inokuthatha ixesha elide ukuba ifike, kuba umona uyazi ukuba usisikelele nini, into ebalulekileyo kukuba ungaphelelwa lukholo kwaye uqiniseke ukuba lo mthandazo usizalisa ngoxolo phakathi kwesiphango esikuyo kwaye unokusenza siqonde izinto ezininzi Besingaqondanga ngaphambili.
Imithandazo inokwenziwa nangayiphi na indlela, nangona oorhulumente bengakwazi ukuhlala becwangcisiwe, imithandazo kwiintsapho okanye iinjongo zomthandazo ezizodwa.
Nangona kunjalo, nganye kwezi fom inokucwangciswa ngeendlela ezininzi kwaye inokuthi yenziwe ngaphakathi amaqela abahlobo okanye usapho.
Okwangoku kukho abo bathi ngamanye amaxesha bangabi nalwazi lokwenza umthandazo okhethekileyo, kule meko unokwenza umthandazo olula, onyanisekileyo nokholo nangaliphi na ixesha nendawo.
Ngokholo sinokuqiniseka ukuba intombi iyasinyamela.
Ngaba le ntombi izakundinceda?
Ewe, kunanini na xa uyifuna.
Njengomama olungileyo usikhokela abantwana bakhe kwaye asinike ezo zicelo sinazo ezintliziyweni zethu.
Abanye babo esingabaziyo kodwa sibadinga ngokungxamisekileyo.
Unokholo ku umthandazo ongummangaliso kwiNtombikazi yeFatima.
Umthandazo kwiNtombi Enyulu yaseJuquila
Umthandazo ongummangaliso kwintombi yaseGuadalupe